" မြန်မာပြည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ မိသားစုလိုက်ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကို ပြန်လွမ်းနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး " - Cele Connections
” မြန်မာပြည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ မိသားစုလိုက်ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကို ပြန်လွမ်းနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး “
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ ပြည်သူ့အချစ်တော် နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးလွင်မိုးရဲ့မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာမျိုးရိုးရှိပြီးကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ပရိသတ်တွေ၊ ချစ်ရတဲ့သူတွေက ချစ်နိုးနဲ့ ခေးလို့ ခေါ်လေ့ရှိကြပါသေးတယ်။
ခေးကတော့ (၂၀၁၈)မှာ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ခင်ပွန်းသည်နဲ့ အတူ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ယူနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လီလီလေးကတော့ တနေ့တခြားချစ်ဖို့ကောင်းလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ အသည်းတွေယားကာ အချစ်ပိုနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သားလေးနဲ့ အချိန်တွေအများဆုံး ကုန်ဆုံးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ကြော်ငြာတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း လက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တဖြစ်ပြီး မိသားစုလိုက် အပန်းဖြေခရီးတွေထွက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သြစတေးလျကို ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပြီး လတ်တလောသူမရဲ့Instagram မှာ မိသားစုလိုက်ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးကို တင်ကာ ” Missing My Family . This was the last trip before coronavirus ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့လွမ်းကြောင်း တင်လာခဲ့တာပါ။CeleConnections ပရိသတ်ကြီးလည်း ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့မိသားစုလေးကို ချစ်ရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” မွနျမာပွညျရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ မိသားစုလိုကျခရီးထှကျခဲ့တဲ့ အခြိနျလေးကို ပွနျလှမျးနတေဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုး ”
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ ယှနျးဝတီလှငျမိုးကတော့ ပွညျသူ့အခဈြတျော နိုငျငံကြျောမငျးသားကွီးလှငျမိုးရဲ့မြိုးဆကျပဲဖွဈပါတယျ။အနုပညာမြိုးရိုးရှိပွီးကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှမြေားစှာပိုငျဆိုငျထားတဲ့မျောဒယျလျမငျးသမီးတဈလကျဆိုလညျးမမှားပါဘူးနျော။ပရိသတျတှေ၊ ခဈြရတဲ့သူတှကေ ခဈြနိုးနဲ့ ခေးလို့ ချေါလရှေိ့ကွပါသေးတယျ။
ခေးကတော့ (၂၀၁၈)မှာ အိမျထောငျကခြဲ့ပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သာလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ ခငျပှနျးသညျနဲ့ အတူ နိုငျငံခွားမှာ ပညာသငျယူနခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လီလီလေးကတော့ တနတေ့ခွားခဈြဖို့ကောငျးလာတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေတော့ အသညျးတှယေားကာ အခဈြပိုနတောတှရေ့ပါတယျ။ မွနျမာပွညျရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ သားလေးနဲ့ အခြိနျတှအေမြားဆုံး ကုနျဆုံးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ ကွျောငွာတှအေပွငျ ရုပျရှငျဇာတျကားတှလေညျး လကျခံရိုကျကူးခဲ့တဖွဈပွီး မိသားစုလိုကျ အပနျးဖွခေရီးတှထှေကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သွစတေးလကြို ပွနျလညျ ထှကျခှာသှားပွီဖွဈပွီး လတျတလောသူမရဲ့ Instagram မှာ မိသားစုလိုကျခရီးထှကျခဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးကို တငျကာ ” Missing My Family . This was the last trip before coronavirus ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့လှမျးကွောငျး တငျလာခဲ့တာပါ။CeleConnections ပရိသတျကွီးလညျး ယှနျးဝတီလှငျမိုးတို့မိသားစုလေးကို ခဈြရငျမှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။
ညီမအရင်းလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ရသူလေး ဓာတ်လိုက်ပြီး မမျှော်လင့်ပဲကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ ဇေရဲထက်
” ကရင်ဝတ်စုံလေးကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်က ဟိုတယ်ထိ လာပို့တာကြောင့် surprise ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ထိပ်ထားလေး”
” သီချင်းအသစ်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရှူတင်ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအားချပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် ”